Raaskaambooni oo la wareegay Diif iyo cabsi ka jira Dhoobley | raascasayrmedia.com
← Maamulka Xarrakatul Shabaab ee G/Shabeellada Hoose oo soo gabgabeeyay howlo lagu daweynayay Xoolaha (SAWIRRO)
Qurba joogta gobolka Raascasayr oo dhaqdhaqaaqyo horumarineed ka bilaabay Gobolka . →
Raaskaambooni oo la wareegay Diif iyo cabsi ka jira Dhoobley
Ciidamo ka tirsan Mucaskarka Raaskaambooni ayaa galabta la wareegay gacan ku heynta deegaanka Diif kadib markii galinkii hore ee maanta deegaankaasi ay ka baxeen ciidamadii xarakada AL Shabaab ee ku sugnaa.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo deegaanka Diif ee gobolka J/hoose ciidamo aad u farabadan oo ka tirsan kuwa uu hogaamiyo Sheekh axmed Max’ed Islaam islamarkaana la magacbaxay Raaskaambooni ayaa galabta si rasmi ah ula wareegay deegaankaasi.
Ciidamada ayaa durba fariisimo ka sameystay saldhigyo ay horay ugu sugnaayeen xarakada Al Shabaab, waxaana ay ciidamadaadi deegaankaasi kula wareegeen iyadoo aysan dhicin wax dagaal ah kadib markii saakay ay deegaankaasi baneeyeen ciidamada Al Shabaab.
Jawiga ayaa ah caawa mid degan, waxaana dadka deegaanku ay Shabelle u sheegeen in ay jirto cabdi dadku ay qabaan oo ah in weerar deegaankaasi ay ku soo qaadaan ciidamadii Al Shabaab ee ka baxay halkaasi kuwaasi oo la tilmaamay in ay ku suganyihiin meel aan sidaasi uga fogeyn deegaanka.
Majiro wax war ah oo ka soo baxay masuuliyiinta Raaskaambooni oo ku aadan dib ula wareegida deegaanka Diif oo maalmihii u dambeeyay gacan ku heynteeda ay is bad badaleysay.
Dhiinaca kale xiisad dagaal ayaa caawa ka jirta degmada Dhoobley ee gobolka J/hoose, waxaana deegaano ku dhow dhow degmadaasi soo buux dhaafiyay ciidamo farabadan oo ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya.